Maitiro ekutaurirana zvinobudirira mukati mebhizinesi
Kutaurirana hakusisiri kungori "nyoro" basa.
Kutaurirana kunogona kuvandudza mashandiro ekambani uye kutyaira bhizinesi kubudirira. Tingaite sei kumisikidza kutaurirana kunoshanda uye nekushandura manejimendi?
Zvinokosha: Kunzwisisa tsika nemaitiro
Chinangwa chekutaurirana zvinobudirira uye shanduko manejimendi kusimudzira hunhu hwakanaka hwevashandi, asi kana pasina tsika yemubatanidzwa uye kuziva kwehunhu sechikonzero, mikana yekubudirira kwekambani inogona kuderedzwa.
Kana vashandi vasingakwanise kukurudzirwa kutora chikamu uye kupindura zvakanaka, kunyangwe zano rakatanhamara rebhizinesi rinogona kukundikana. Kana bhizinesi rikatsvagisa zano rekuvandudza, ipapo vese vashandi vanofanirwa kushingairira kuita hutsva kufunga uye kugovana mazano matsva pakati pavo. Makambani akabudirira kwazvo anovaka tsika tsika inoenderana nezano ravo rekambani.
Maitiro akajairwa anosanganisira: kujekesa kuti ndeapi mapoka evashandi uye ndeapi tsika dzinodiwa kutsigira zvinangwa zvekambani; kusarudzira vashandi vekambani uye kujekesa izvo zvinogona kukurudzira maitiro emapoka akasiyana evashandi kuitira kuti vakwanise kubatsira kambani kuzadzisa zvinangwa zvayo; zvinoenderana neruzivo rwuri pamusoro, Gadzira mamiriro emabasa uye mibairo uye zvinokurudzira zveboka rega rega revashandi zvichienderana nehupenyu hwetarenda.
Nheyo: Vaka unokwezva mushandi kukosha kwesarudzo uye kuiisa mukuita
The Employee Value Proposition (EVP) ndiyo "chibvumirano chebasa", chinosanganisira zvese zvinoitika zvevashandi musangano - kusanganisira kwete chete mabhenefiti evashandi (ruzivo rwebasa, mikana, uye mibairo), asiwo mushandi anodzoka anotarisirwa ne sangano (kugona kwevashandi), Kushanda nesimba, kuzvivandudza, hunhu uye hunhu).
Makambani anoshanda ane hunyanzvi hwekuita mune zvitatu zvinotevera zvinhu:
(1) Makambani anoshanda anodzidza kubva kunzira yekukamura musika wevatengi, uye kupatsanura vashandi mumapoka akasiyana zvichienderana nehunyanzvi hwavo kana mabasa, pamwe nehunhu hwavo hwakasiyana uye chinzvimbo munharaunda. Inofananidzwa nemakambani asingabatsiri, makambani anoshanda zvakanyanya ane mukana wakapetwa kaviri wekushandisa nguva vachinzwisisa zvinokurudzira mapoka akasiyana evashandi.
Makambani anoshanda zvakanyanya anogadzira musiyano wevashandi kukosha kwekusimudzira tsika nehunhu hunodiwa nesangano kuzadzisa zvinangwa zvebhizimusi. Iwo makambani anoshanda zvakanyanya akapetwa katatu mukana wekutarisa pane hunhu hunotyaira kubudirira kwekambani pachinzvimbo chekutarisa zvakanyanya pamubhadharo weprojekiti.
Kubudirira kwevatungamiriri mumasangano anoshanda zvakanyanya kwakakosha mukuzadzisa zvirevo zvevashandi. Aya mamaneja haangotsanangure chete "mamiriro ekushandira" kune vashandi, asiwo kuzadzisa zvavakavimbisa (Mufananidzo 1). Makambani ane EVP yepamutemo uye anokurudzira mamaneja kuti ashandise zvizere EVP ichatarisisa zvakanyanya kune mamaneja anoshandisa EVP.
Sangano: kurudzira mamaneja kuti aite anoshanda shanduko manejimendi
Mazhinji emakambani ekushandura mapurojekiti haana kuzadzisa zvinangwa zvakatemwa. Chete 55% yemabasa ekuchinja akabudirira mudanho rekutanga, uye chete chikamu chechina chemabasa ekushandura akawana kubudirira kwenguva refu.
Mamaneja anogona kuve chinongedzo chebudiriro shanduko-fungidziro ndeyekugadzirira mamaneja ekuchinja uye kuvabata kuti vazvidavirire pabasa ravo mukushanduka kwekambani. Anenge makambani ese anopa hunyanzvi kudzidziswa kwemaneja, asi kota chete yemakambani anotenda kuti izvi kudzidziswa zvinoshanda chaizvo. Makambani akanakisa anowedzera mari yavo mukudzidziswa kwemaneja, kuti vakwanise kupa vashandi vavo rutsigiro nerubatsiro panguva yeshanduko, vateerere zvavanoda uye vape mhinduro yakasimba uye yakasimba.
Maitiro: Vaka tsika yemunharaunda tsika uye kukurudzira ruzivo kugovana
Munguva yakapfuura, makambani akatarisisa kuchengetedza hukama hwekushanda pamwe nekumisikidza hukama hwakajeka pakati pebasa revashandi nemhinduro yevatengi. Zvino, vashandi vane shungu netekinoroji nyowani vari kusimbisa hukama hwakanyanya uye hwakabatana hwekushanda pamhepo uye pasiri pamhepo. Iwo makambani anoita mushe ari kuvaka nharaunda dzemakambani-kurima symbiosis pakati pevashandi nemakambani pamatanho ese.
Panguva imwecheteyo, data inoratidza kuti maneja anoshanda akakosha kupfuura vezvenhau kana vachivaka nharaunda. Chimwe cheakakosha maitiro evatariri vanoshanda mumamiriro azvino kusimbisa hukama hwekuvimba nevashandi vavo - kusanganisira kushandisa maturusi matsva enharaunda uye kuvaka pfungwa yemakambani enharaunda. Iwo makambani anoshanda zvakanyanya achanyatsoda mamaneja kuvaka nharaunda dzemakambani uye kugona hunyanzvi hwekuzadzisa ichi chinangwa - hunyanzvi uhu hauna hukama nekushandisa kana kwete kushandisa midhiya nyowani.